Alima Mahama - Wikipedia
Minister for Woman and Childrens Affairs (Ghana)
Member of Parliament for Nalerigu/Gambaga
7 January 2017 – 6 January 2020
17 November 1957 (1957-11-17) (age 64)
Hajia Alima Mahama (wɔwoo no Obubuo da a ɛtɔ 7, afe 1957 wɔ Walewale, Atifi-Apuei manatam mu) yɛ mmaranimfo. Na ɔyɛ mmarahyɛbaguamuni a ogyina hɔ ma Nalerigu/Gambaga mpesua. Ɔyɛ amanyɔkuo New Patriotic Party muni.
3 Ne nnwuma afoforo
5 Beae a menyaa mmoa fii
Alima Mahama nyaa kɔɔ ntoaso sukuu wɔ Wesly Girls Senior High School a ɛwɔ Cape Coast. Ɔtoaa so kɔɔ suapɔn a ɛne University of Ghana. Ɛhɔ no onyaa abodin krataa wɔ mmaranim mu. Ɔsan nso kɔɔ suapɔn a wɔfrɛ no Institute of Social Studies a ɛwo Netherlands na ɛhɔ nso onyaa abodin krataa foforo kaa nea ɔwɔ dedaw no ho.
Alima Mahama gyinaa amanyɔkuw New Partioitic Party (NPP) din mu sii akan wɔ Ghana 2016 Mpesua abtaow mu. Wɔ saa abatow no mu no ɔde aba no mu ɔha mu nkyekyɛmu 53 dii nkonim wɔ Nalerigu/Gambaga mpesua so.
Ɔsan somee sɛ Ghana aban soafo a ɔhwɛ mmea ne mmɔfra yiyiedi asoeɛ(Minister for Women and Children's Affairs) so fi Ɔpɛpɔn 2005 kosi Ɔpɛpɔn afe 2009. Saa bere no na ɔmanpanyin a na odi Ghana so yɛ John Kofi Agyekum Kufour. Ɔsan nso somee sɛ aban soafo a ɔhwɛ mpesua ne nkurase amanbuo(Minister for Local Government and Rural Development) so. Ghana manpayin Nana Akufo-Addo na ɔpaw no wɔ Ɔpɛpɔn da a ɛtɔ so 10, afe 2017. Ɔsan nso somee sɛ ɔsoafo abadiakyiri a ɔhwɛ aguadi so.
Mahama somee sɛ Ghana aban ananmusini ma United States, Amerika. Ɔne Ghanani bea a odi kan a wɔapaw no sɛ Ghana aban ananmusini ma Amerika. Wɔpaw no afe 2021 wɔ ɔmanpanyin Nan Akufo-Addo nniso mu.
Ne nnwuma afoforo[sesa]
Ɔka mpanyimfo a wodi kuw bi wɔfrɛ no Global Alliance for Clean Cookstoves anim.
Alima Mahama yɛ kramoni.
Beae a menyaa mmoa fii[sesa]
↑ 1.0 1.1 1.2 https://ghanaembassydc.org/news-and-events/h-e-hajia-alima-mahama-takes-post-as-ambassador-of-ghana-to-the-united-states/
↑ 2.0 2.1 https://ghanaelections.peacefmonline.com/pages/2016/northeast/nalerigu_gambaga/
↑ 3.0 3.1 https://cleancooking.org/team-member/hajia-alima-mahama/
↑ 4.0 4.1 https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/Hajia-Alima-Mahama-Ghana-s-first-woman-ambassador-to-the-US-1318849
Yɛ yi fii "https://tw.wikipedia.org/w/index.php?title=Alima_Mahama&oldid=61561"
Nsesae ba kratafa yi so da 12 Ogyefuo 2022, mmere 18:53.